Owayesakuba ngumxhasi-mali weHedge utyhila intlawulo kaShirley Temple ephefumlelweyo yeRap kuBillionaire oseluvalelweni ngoku. - Ishishini
Owayesakuba ngumxhasi-mali weHedge utyhila intlawulo kaShirley Temple ephefumlelweyo yeRap kuBillionaire oseluvalelweni ngoku.
Umgca ongaphambili/PBS / Via ividiyo.pbs.org
Ngaphambi kwe-hedge fund yebhiliyoni uRaj Rajaratnam ndafumana esona sigwebo siqatha sentolongweni kurhwebo lwangaphakathi, omnye wabasebenzi bakhe ngelo xesha, uTurnery Duff, wenze intlawulo ephefumlelweyo kaShirley Temple kwingxowa-mali kaRajaratnam , iGalleon Group.
Kwingxelo kaDuff yexesha lakhe eWall Street kunye nokuzabalaza kwakhe nokusetyenziswa kakubi kotywala neziyobisi, The Thenga icala , uchaza xa irapper uJesse Jaymes - ogama lakhe lokwenyani nguJesse Itzler kwaye yimvumi enoxanduva lomculo weNew York Knicks 'Go NY Go' - wambiza ukuba amncedise ekuqulunqeni amazwi engoma uJaymes awayeza kuyenza ezinikele kuGalleon Itheko lenkampani ngo-Okthobha, 2000. UDuff ngumlandeli wehip-hop ubomi bakhe bonke owaqala iqela lamadoda amabini we-rap elibizwa ngokuba yi-'Maximum Intensity' e-Kennebunk, eMaine ekupheleni kweminyaka yoo-1980.
UDuff uthi babeneveki kuphela 'yokubhala, ukurekhoda kunye nokuvelisa ingoma,' kwaye yayikwintlanganiso noJaymes apho waphefumlelwa yisidlaliso sikaGalleon's Wall Street 'inqanawa elungileyo' ukuba isampula ingoma yeShirley Temple ' KwiLollipop yenqanawa elungileyo .'
Okuseleyo kukunganyaniseki komculo: le ngoma inamazwi afana nala athi ''Sirhweba ngesitokhwe, kwaye siyenza kakuhle, urhwebo lwethu lokuqala yayiziwaranti eziyi-100,000 ze-Intel' kunye 'noRaj noChris, isitokhwe sabo asiphosi, banokusebenzisana. efakwe kwinqaku elithi 'Hlalutya Oku'!' Njengoko uDuff ebonisa, ingxowa-mali yayithumele i-93% yembuyekezo kunyaka ongaphambili, kwaye 'ukuba uphuma kwi-93% yonyaka - akufanelanga ukuba wenze ingoma ye-rap?'
UGalleon uvale ngo-2009, iveki emva kokuba uRajaratnam ehlawuliswe ngokurhweba ngaphakathi.
Amazwi engoma zaxelwa nge Iposi yaseNew York ngo-2009. Ungamamela le ngoma apha .
Uyilo lwangaphakathi ekhaya izimvo
Ikrisimesi emnandi eyakha yakho snl
iglasi ibala yoyilo lweewindows
Ipeyinti efanelekileyo yegumbi lokuhlala